Paris: Xus Loo Sameeyay Askartii Somaliland Ee Ku Dhintay Dagaaladii 1aad iyo 2aad |
Paris: Xus Loo Sameeyay Askartii Somaliland Ee Ku Dhintay Dagaaladii 1aad iyo 2aad
Hargeisa(GNN):-Wasaarada gaashaandhiga dawlada Faransiiska ayaa qabatay munaasibad lagu xusayay Askartii reer Somaliland ee ka qayb galay kuna dhintay dagaaladii Koowaad iyo Labaad ee dunida.
Iyadoo askartaasi ay u dagaalameen dawlada Faransiiska sanadihii 1914-1918 iyo sanadihii 1939-kii ilaa 1945-kii.
Munaasibad lagu Xusayay Askartii reer Somaliland ee ka qayb galay dagaaladaasi ayaa shalay lagu qabtay Fagaaraha dalka jirka Dahsoon ee magaaladda Paris ee caasimada dalka Faransiiska.
Taasoo ay ka soo qab galeen saraakiil ka tirsan ciidanka dalka Franch iyo qurbe jooga reer Somaliland ee degan magaaladda Paris.
Calanka Jamhuuriyadda Somaliland iyo calanka dalka Franch ayaa la sudhay goobaha lagu qabtay xuskan.
Guddoomiyaha ururka Raad-raaca taariikhda Askartii Somaliland ee u dagaalantay dalka Franch Ibraahim Yusuf Guuleed, ayaa xuskaasi ku tilmaamay kii u horeeyay ee la qabto.
Ibraahim Yusuf Guuleed, oo u waramayay talefishanka qaranka Somaliland ayaa sheegay in ay tahay markii ugu horaysay taariikhda dalka Franch laga xuso Askarkii reer Somaliland ee ku dhintay dagaaladii koowaad iyo labaad ee dunida.
Waxaanu yidhi “Waa markii u horaysay ee Wadada Caanka ah ee magaaladda Paris iyo taalada dal jirka Dahsoon ee dalka Franch lagu qabto munaasibad lagu xusayay Askartii Somaliland ka soo jeeday ee ku ku dhintay dagaalkii Koowaad ee Aduunka iyo dagaalkii labaad ee Aduunka.
Waxaanay askartaasi u qoran yihiin wasaaradda Gaashaandhiga wadanka Franch in ay ahaayeen Askartii Somaliland ka timid ee u dagaalantay dalka Franch. Waxaanan iska kaashanay qabashada xuskan wasaarada Gaashaandhiga ee dalka Franch.
Waxaana loo tumayay miisiga ciidanka qaranka ee Faranch, waxa kaloo la tumayay heestii ciidanka Franch”.
Ibraahim Yusuf Guuleed, ayaa wax aad u qiimo badan iyo guul ku tilmaamay qabashadda xuskaasi. “Waxaanay ahayd wax aad u qiimo badan xuskani, yididiilo ayaanay na gelisay, halkaas ayaanu ka sii wadi doonaa. Waana guul u soo hoyatay Somaliland.
Waxaanan rejaynayaa in aanu casuumi doono madaxda Somaliland ka socota, oo ka yimaada dalkii”ayuu yidhi guddoomiyaha ururka Raad-raaca taariikhda Askartii Somaliland ee askartii u dagaalantay Faransiiska .
Dhacdooyinka-'Waxa Uu Waraabiye Ka Yahay Dhirta Wasaarada beeraha Isagoo Bartay…
Dag Dag Gabiley oo laga Bilaabay olole Nadafadeed oo ku…
Halkan ka Daawo madaxwaynaha Somlaliland Bulshda Hargaysa La Tukaday Salaada…
Dr Diiriye Ereg Wuxuu Ahaa Qof Haa’diisa Iyo Maya’diisuba Qalantahay…
Wasaarada Arimaha Dibada Somaliland Oo Bilaa Wasiir Ah iyadoo Mandaqada…
Waxan Uga Imi Dalka Sweden Cagaftana An U Soo Iibsaday…
Halkan ka Daawo Heesta Calanka JSL iyo Bandhiga Buugga Hawaale…
Halkan Ka Daawo:Shirka Ku Saabsan Arimaha Amniga Somlailand …
Gabadhii Ugu Horaysay Ee Somaliyada Ee Ka Qayb Gasha Tartanka…
Afayeenka ONLF Oo Si Adag Uga Hadlay Colaada Ka Tagan…
Dawlada Itoobiya Oo Hakad Galisay Duulimaadyadii Garoonka Diyaaradaha Addis Ababa…
Taliyaha Ciidamada Qaranka Jamhuuriyada Somaliland Oo Xadhiga Ka Jaray Miiska…
Madaxweynaha Somaliland Oo Sagootiyay Dan-Jirihii hore ee Midowga Yurub Amb.…